Fiara 5C, Shina 5C, Fiarovan-dàlana 5C, 5H-Hira, Rantsana 5C
Home > Products > Spring Collets5C Collets
Ny vokatra avy amin'ny 5C Collets , mpanofana manokana avy any Shina, 5C Collets , Precision 5C Collets mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny 5C R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Rindrina fanongonana 5C ho an'ny 5C Collet Chuck
High Precision 65Mn 5C hooks
High Precision 65Mn material 5C Square Collet Ny Precision High 65Mn 5C COLLET , fantatra amin'ny anarana hoe solam-pamokarana lohataona, dia miorina eo amin'ny biriky / milina mena, ny biriky ary ny miller, ary ny asany dia ny hametahana ny bozaka na ny antsy. Ny famadibadin'andro dia ampiasaina...
Rindrina fanongonana 5C ho an'ny 5C Collet Chuck Ny Precision High 65Mn 5C COLLET , fantatra amin'ny anarana hoe solam-pamokarana lohataona, dia miorina eo amin'ny biriky / milina mena, ny biriky ary ny miller, ary ny asany dia ny hametahana ny bozaka na ny antsy. Ny famadibadin'andro dia ampiasaina...
5C Ny Precision High 65Mn 5C COLLET , fantatra amin'ny anarana hoe solam-pamokarana lohataona, dia miorina eo amin'ny biriky / milina mena, ny biriky ary ny miller, ary ny asany dia ny hametahana ny bozaka na ny antsy. Ny famadibadin'andro dia ampiasaina indrindra. Ny fahatanterahany matanjaka, ny...
High Precision 65Mn 5C hooks Ny Precision High 65Mn 5C COLLET , fantatra amin'ny anarana hoe solam-pamokarana lohataona, dia miorina eo amin'ny biriky / milina mena, ny biriky ary ny miller, ary ny asany dia ny hametahana ny bozaka na ny antsy. Ny famadibadin'andro dia ampiasaina indrindra. Ny...
Shina 5C Collets mpamatsy
Ny High Precision 5C COLLET , fantatra amin'ny anarana hoe angam-pamokarana amin'ny lohataona, dia miorina amin'ny biriky / milina mena, ny biriky ary ny miller, ary ny asany dia ny fametahana ny bokotra na ny antsy. Ny famadibadin'andro dia ampiasaina indrindra. Ny fahatanterahany matanjaka, ny fahamarinan'ny ankamaroan'ny mpamokatra matoky. Ny vokatra rehetra dia famonoana maingoka.
1. Ny fitaovana: 65Mn
2. Hery: HRC44-48
3. Fandrosoana dingana 1mm na 1/64 "
4. Avo-dàlana 6 eo anoloana sy aoriana
5. Manao asa fanompoana amim-pahatsorana
Tombontsoa avy amin'ny vokatra:
1. fitsaboana avo lenta, fahamendrehana henjana.
2. endrika feno mamirapiratra, elasticity tsara
3. Fiantohana fitomboana, maharitra ary tsy mora
4. Fahamarinana: vita amin'ny 65 metatra ny fehezan-dalàna mifehy, manana fiainana ambony kokoa.
BT40 Series fitaovana famadihana fitaovana
13mm Toro-kofehy mofomamy mitaingotra
5C Collets Precision 5C Collets 5C Whosale 5C Collets SDC Collets